के भन्छिन् त गर्भवती भएको हल्लाबारे दीपिका ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
के भन्छिन् त गर्भवती भएको हल्लाबारे दीपिका ?
मुम्बइ। पछिल्लो समय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिल्म ‘छपाक’को सुटिङमा ब्यस्त छिन् । फिल्ममा उनले एसिड आक्रमणमा परेकी लक्ष्मी अग्रवालको भूमिका निभाइरहेकी छन् । फिल्म सेटको केही तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिसकेका छन् ।
विवाहपछि अभिनेत्री दीपिकाको यो पहिलो फिल्म हो । दीपिका र रणवीर सिंहले गत वर्ष १४–१५ नाभेम्बरमा विहे गरेका थिए । तर विवाह भएको केही समयपछि नै दीपिका गर्भवती भएकी खबर आएको थियो । हालै एक मिडियासँग उनले यस्तो हल्लाबारे बोलेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘यो कुरा जब हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ, तब हुनेछ ।’
दीपिकाले विवाहपछि महिलालाई गर्भवती हुने दबाब दिन आवश्यक नरहेको बताइन् । गर्भवती एकदिन हुनेनै भएकाले बारबार यसबारे बोलिरहनु गलत भएको उनको भनाइ छ । उनले भनेकी छन्, ‘मलाई लाग्छ, जब हामी यस्तो सवाल सोध्न बन्द गर्छौं, तब समाजमा ठूलो बदलाव आउने छ ।’ अहिले सुटिङ गरिरहेकी दीपिकाको फिल्म ‘छपाक’ २०२० जनावरीमा रिलिज हुनेछ ।